Akụkọ - Ọdịiche dị n’etiti Gbasara Pipe na Nrụ Ọdụ
Ọdịiche Dị n'Etiti Gburugburu Pipe na Wịidị Kwụsị
Isi ihe dị iche n'etiti eriri abụọ a na-agbanye ọkụ nke ọkpọkọ na-agbanye ọkụ na ọkpọkọ kwụ ọtọ bụ ihe dị iche na ụdị ịgbado ọkụ.
Gburugburu welded anwụrụ bụ a obere carbon carbon bughi ígwè ma ọ bụ a ala alloy bughi bughi karfe warara akpọrepu n'ime a tube oghere na a ụfọdụ helix n'akuku (na-akpọ akpụ n'akuku), na mgbe ahụ welded ma mee ka a ọkpọkọ nkwonkwo, nke nwere ike iji a warara warara ígwè Production nke nnukwu dayameta ígwè ọkpọkọ. Gburugburu welded anwụrụ tumadi gburugburu submerged aak welded anwụrụ (SSAW), nke a na-eji na-ewu nke dị iche iche gas pipelines na China. A na-egosipụta nkọwa ya site na "mpụta nke mpụga * mgbidi ọkpụrụkpụ". Gburugburu welded ọkpọkọ na-otu kwadoro welded na abụọ-n'akụkụ welded. Igwe a na-agbanye ọkụ ga-ahụ na ule hydraulic na ike mgbatị na arụmọrụ oyi na-arụ ọrụ nke weld na-agbaso usoro iwu.
The ogologo onuete welded anwụrụ bụ a elu-ugboro ugbu na a idi nso mmetụta nke a ga-eme site na solder oyi akwa tupu ịgbado ọkụ na-guzobere site na ịkpụzi igwe, na nsọtụ nke tube oghere bụ kpụ ọkụ n'ọnụ na gbazee, na na-gwakọtara n'okpuru ụfọdụ ịpị ike, ịkpụzi jụrụ. A na-eji pipụ welded ọkpọkọ a na-ejikarị arụ ọrụ nke a na-agbaze ọnụ nke ọkpọkọ ọkpọkọ ahụ site na nnukwu ọsọ ugbu a (ERW), nke a na-akpọ ọkpọ mmiri na-agbazi arc welded (LSAW) site na iji agbaze elektrik.
Ike nke ọkpọkọ welded gburugburu bụ nke dị elu karịa nke ọkpọkọ ọkpọkọ kwụ ọtọ. Usoro imepụta ihe bụ isi arx welding. Gburugburu welded ọkpọkọ nwere ike ịmepụta welded ọkpọkọ na dị iche iche anwụrụ diameters na otu obosara nke blanks, na nwekwara ike na-emepụta welded ọkpọkọ na ibu dayameta na warara oghere.
Usoro mmepụta nke ọkpọkọ welded kwụ ọtọ dịtụ mfe, ọkachasị na usoro nrụpụta, nke a na-ekewa n'ime mgbatị ọkụ a na-agbanye ọkụ na-ebugharị na mmiri a na-agbanye ọkụ. The ogologo onu welded anwụrụ nwere elu mmepụta arụmọrụ, ala na-eri na ngwa ngwa mmepe.
Otú ọ dị, e jiri ya tụnyere ọkpọkọ ọkpọ ọkpọ kwụ ọtọ nke otu ogologo ahụ, a na-agbatị ogologo weld site na 30 ruo 100, na mmepụta mmepụta dị ala. Ya mere, ndị obere dayameta welded ọkpọkọ ndị ka ukwuu n'ime ogologo onuete welded, mgbe nnukwu dayameta welded ọkpọkọ ndị ka ukwuu n'ime gburugburu welded.